Ayyaanni Guyyaa Gootota Oromoo sirna hoo’aadhaan kabajame. – OROMOCENTRE
You are here: Home / Uncategorized / Ayyaanni Guyyaa Gootota Oromoo sirna hoo’aadhaan kabajame.
Ayyaanni Guyyaa Gootota Oromoo sirna hoo’aadhaan kabajame.
April 16, 2012 by Oromo Community in Melbourne 4 Comments
(Oromocentre, Melbourne, 16 Ebla 2012) Hawaasti Oromoo biyya Australia, magaalaa Melbourne keessa jiraatan ayyaana Guyyaa Gootota Oromoo, Ebla 15, sirna hoo’aan kabajatan.
Ayyaana Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15, 2012 waaree booda magaalaa Melbourne, wiirtuu Hawaasaa Paddy O’Donoghue Centre jedhamu keessatti kabajame irratti hawaasti Oromoo maatii isaanii waliin hirmaatuun gootota Oromoo Bilisummaa Oromiyaaf lubbuu isaanii wareegan mara kabajaan yaadatanii jiran.
Ayyaanni kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaa sadiin kan eegale yoo ta’u, eebba sirna kana irratti darbe keessattis hawaasti Oromoo bakka jirutti harka walqabatee Kaayyoo isaa milkeessuu irratti akka hojjatu, nagaa fi bilisummaa dhugoomsuufis, tokkummaa fi jaalala Oromummaa irratti hundaa’ee akka tarkaanfatu dhaamamee jira.
Ittaansuun Faaruun Alaabaa Oromoo fi kan biyya Australia kan dhiyaate yoo ta’u, gootota Oromoo Bilisuammaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf lubbuu isaanii wareeganiifis yaadannoon godhamee jira.
Ayyaana kana irratti dura taa’aan Waldaa Hawaasa Oromoo Melbourne Kibba-Bahaa, Ob Tasfaayee Wayyeechaa, dubbii dhageessisan keessatti ummati Oromoo saba biyyaa fi mootummaa mataa isaa humnaan dhabee ta’uu yaadachiisuun, seenaa diddaa fi qabsoo Oromoo keessatti gootota qaqqaalii akka wareegee fi wareegaa jiru ibsan.
Ummati Oromoo bara garbummaa jalatti kufee kaasee qabsootti akka jiru kan ibsan Ob Tasfaayeen, keessaayyuu jaarraa tokkoo as dhiibbaan alaagaa akka ummati Oromoo qe’ee isaa dhiisee godaanuun jireenya koolugaltummaatti galu sababa guddaa ta’uu hubachiisanii jiran.
“Har’as taanaan ummati Oromoo waan mirga isaa gaafateef qofaa dachee isaa keessatti hidhamaa fi ajjeefamaa jira,” kan jedhan dura taa’aan Waldaa Hawaasa Oromoo Melbourne Kibba-Bahaa, dhibdeen ummata Oromoo biyya keessaa fi biyoota ollaa dhibdee hawaasa Oromoo biyya Australia keessa jiraatanii waan ta’eef mootummaan Australia fi hawaasti addunyaa gaaffiin hiree murteeffannaa ummata Oromoo karaa Mootummoota gamtoomanii fi Gamtaa Afrikaa akka deebii argatuuf dhiibbaa dipiloomaasii akka godhan gaafatanii jiru.
Ayyaana kana irratti keessummooti addaddaa afeeramanis dhimma Oromoo ilaalchisanii dhaamsa kan dabarsan yoo ta’u isaan keessaa bakka bu’aa Hawaasa Gaambeellaa Australia, Ob Bichook Kot dhaamsa dabarsan keessatti ajjeechaa fi hidhaan ummata Oromoo irra gahaa jiru, kan ummata Gaambeellaa irra gahaa jiru waliin kan walfakkaatu ta’uu ibsuun, sirna Wayyaanee biyya san keessaa buqqisuuf qabsoo haqaa fi Bilisummaa ummati Oromoo finiinsaa jiru dhugaatti kan hubatanii fi deeggaran ta’uu himanii jiru.
Ayyaana kana irratti keessummooti addaddaas haala Oromoo ilaalchisee ibsa kan kennan yoo ta’u, ayyaana kana irratti dhangaan aadaa Oromoo fi walleen warraaqsaa fi aadaa Oromoo dhiyaatanii eenyummaa ummata Oromoo akka mul’isan beekameera.
Ayyaana Guyyaa Gootota Oromoo kun Sabboontota Oromoo qabsoo saba isaaniitiif jecha lubbuu isaanii bakka bu’aa hin qabne sana aarsaa godhanii darban yaadachuu callaa otuu hin taane, faajjii gootota Oromoo ol kaasuun qabsoo saba Oromoo dhugoomsuuf kanneen aarsaa ta’an biqilfachuun cinattis, kanneen amma illee qabsootti jiran jajjabeesuuf ta’uunis sagantaa kana irratti ibsamee jira.
Hawaasti Oromoo yeroo duraatiif bara 1984 biyya Australia keessa qubate. Yeroo ammaa kanatti hawaasti Oromoo gara kuma kudhanii ta’u biyya Autsralia keessa akka jiraatu tilamaamni ni jira.
« “Tokkummaan Dantaa Sabaa irratti Gamtaan Hirmaachuu dha.”
Crime against Humanity »
Humneessaa Sabaa says:
Warra Awustraliyaa, hedduu bareedatti jirtuu jabaadhaa. Fakkeenyummaan keessan bakka Ummanni Oromoo jiru maratti haa babal’ati. Akkanaatti bareeddanii yommmuu mul’attan qabsaa’ota Oromoo haamleessee humneessa, sarbeessa, diina mataa gadi qabsiisa, mogolee laaffisa. Galatoomaa.
Falmataa Biyyasaa says:
Yammuun isin ilaalu nan qabbaneeffadha.isin warri biyya hambaa jirtaniyyuu akkanatti bilisummaadhaaf wareegamtu hedduu nama jajjabeessitu.tokkummaan keenya ittihaafufu kun diinatti garaa ciniinnaa ta’aa.
biyya keessaatti garuu gaararraan baay’achaa jirtii isheemmoo of keessaa kaafna malee.Gootota oromoof waaqayyo umurii dheeraa haakennu.
Abdiisaa Kumarraa says:
Nyga’eera maal hamma yoomiitti ishee faarsinaa? ka’uu qabna.maaljarana kantaa’ee nu ilaaluyyuu nutti nkolfa’oo.
Diriba Elias says:
yaa qabsaa’ota gootota oromoo kan durii fi kan ammaa! kan biyya keessaa fi alaa, kan darbeef galanni koo isiniif guddaadha!!!Waaqni umurii dheeraa isiniif haa kennu!! haa ta’u malee, yeroo ammaa Tokkummaan ,jaalalli, waliigalteenii fi wal-dhaga’uun maaliif nutti hir’ataa dhufee?kottaa haa dammaqnu!”yaa lammii oromoo:Isa darbe,isa keessa jirtuu fi isa si fuuldura jiru”hin dagatin!!!!
Leave a Reply to Humneessaa Sabaa Cancel reply